Gpws tsy miasa amin'ny fiaramanidina
fanontaniana Gpws tsy miasa amin'ny fiaramanidina
1 taona 11 volana lasa izay #760 by aamalk
Nifindra nanodidina ny 5 aho dia nanampy tamin'ny fiaramanidina izay nilaza fa manana gpws fa tsy mahare na inona na inona rehefa any landing.do mila ilainao izany any amin'ny faritra hafa sa mandeha miasa?
1 taona 6 volana lasa izay - 1 taona 6 volana lasa izay #937 by DRCW
The FSX ny rakitra feo dia amboarina amin'ny alàlan'ny rakitra dll ary ny dikan-teny 64 bit dia manetsika azy ireo amin'ny fampiasana xml. Raha sahy ianao dia afaka mamadika ireo rakitra ireo ho xml
Na dia manondro ny anarany aza ny anarany FSX, io fiasa io dia hiasa ao amin'ny FS2004. Mifototra amin'ny dsd_xml_sound3.gau.
gauge10 = dsd_fsx_xml_sound! Feo, 2,2,2,2,. / gauges / dsd_xml_sound.ini
Ny fiovana manan-danja indrindra amin'ny fiasan-tsasatra dia ny fomba itondrany ny fanamafisam-peo. Ny dikan-dikan-dikan-dikan-dikan-teny teo aloha dia nampiasa sehatra 0 ho 100 mba ahafahana / mametraka ny haavony. Nosoloiko izany tamin'ny laha-teny nampiasaina tamin'ny DirectSound, -10000 (maneho tena, mangina tanteraka) mankany 0 (maneho ny volom-borona). Raha toa ka manova olana amin'ny code misy anao io fanovana io dia azonao atao ny mametraka fari-piadidiana (L: Old Volume Control) mba hanerena indray ny lasitra amin'ny fomba efa tranainy. Zahao etsy ambany.
Ho an'ireo izay tsy nampiasa dikan-teny maoderina teo aloha, ny feo tsirairay dia fehezin'ny XML X L: Variable (izay antsoina hoe LVR). Hifehezanao ny feo amin'ny fametrahana ny fari-pefy (LVar) amin'ny lanjany mifanaraka amin'izany ho an'ny hetsika tianao. Manendry rindrambaiko hampiasa feo fitambaran-kitendry ianao. Asehoy ny antontan-drakitra fikirakirana ao amin'ny panel.cfg, ho toy ny singa fahadimy amin'ny elanelan'ny "feo" - jereo ny ohatra etsy ambony. Ny kalitao dia hanaraka ireto fomba manaraka ireto amin'ny fanombanana ny lahatahiry fanalahidy napetraka:
1. Manondro lalana iray ianao raha manomboka izany amin'ny 'dot' - jereo ny mari-pamantarana samihafa, ambony. Ity teboka ity dia mamatotra antsika amin'ny fapetra fototra FS. Ao amin'ny ohatra etsy ambony, ny filein-drakitra dia hita ao amin'ny lahatahiry FS gauges, ary io dia antsoina hoe dsd_xml_sound.ini. Tsy voafetra amin'ny ordinatera FS gauges ianao, azonao atao ny mamaritra izay lahatahirinao tianao Ny hany tokana dia ny fiantohana ny endriky ny mpampiasa manana ny lahatahiry aseho ao amin'ny rafitra FS folder. Ity no fomba ampiasain'ny dikan-teny teo aloha teo amin'ilay mari-pandrefesana.
2. Azonao atao koa ny manamboatra lalana iray mankany amin'ny rakitra fikirakirana anao. Ny kalitao dia hikaroka ny anarany mahazatra. Amin'ny fanesorana ny anaran'ny mari-pahaizana manokana, dia havela miaraka amin'ny lalana mankany amin'ny lahatahiry manokana izay napetraka ny mari-pamantarana. Amin'ity lalana ity dia hampidirinao ny lahatahiry sy ny anaran-drakitra noforonina. Ohatra, ny fiaramanidina fitsidihana mahazatra ahy dia napetraka ao anaty ordinatera antsoina hoe:
Mametraka ny mari-pamantarana ao amin'ny lahatahiry ny tontonana, ary mamaritra ny antontan-drakitra fanalahidy toy izany:
gauge37 = dsd_fsx_xml_sound! Feo, 2,2,2,2, \_ dsd_fsx_test_sound.ini
dia hitarika ny famaritana ny fanoratana
D: \_fsx\_ Aircraft \_ b777_300 \_ tontonana \_ dsd_fsx_test_sound.ini - mametraka ny rakitra mpanitsy ao anatin'ny takelaka tontonana fiaramanidina fiaramanidina, miaraka amin'ny fanamafisam-peo
Mariho fa amin'ny alalan'ity fomba ity, dia tsy misy 'dot' eo am-piandohan'ny string parameter panel.cfg, fa ny string dia manomboka amin'ny / / toetra. Ny kalitao dia hitandrina ny / sy ny tarehimarika mitovy.
3. Raha toa ka tsy mahita teboka na tadin-tsipika ilay lanjany eo am-panombohan'ny string, dia hikaroka ilay tsipika ho an'ny marika "colon" izy io: "Raha mahita iray izy, dia heverina fa nanome lalana feno ianao, anisan'izany ny taratasy fampiasa, amin'ny rakitra fikirakirana ary manandrana mameno azy tsy misy fanitsiana.
Tsy manolo-tena io fomba io aho fa tsy amin'ny fampiasana manokana amin'ny solosainao manokana. Mamaritra ny kofehy fanamafisam-peo toy ny "D: \_fsx\_ gauges \_ sound_config.ini "dia mangataka olana raha mizara tontonana ianao. Izahay dia tsy fantatsika hoe aiza no nametrahan'ny mpampiasa farany ny FS.
4. Raha toa ka tsy mahita "character" izy io, dia hiheveranao fa manandrana manamboatra lalana amin'ny fomba mitovy amin'ny fomba fanao 2, etsy ambony. Izy io dia hampiditra ny tsipika nomerao eo amin'ny làlana izay misy ny mari-pamantarana, manolotra ny karazana slash toy ny ilaina. Mijanòna miaraka amin'ny ohatra asehon'ny fiaramanidina fitsapana ahy, miaraka amin'ny mari-pamantarana voaray ao amin'ny lahatahiry anaty fonosana, izay manome fehezan-tsipika tahaka izao:
gauge37 = dsd_fsx_xml_sound! Feo, 2,2,2,2, panel_sounds \_ dsd_fsx_test_sound.ini
D: \_fsx\_ Aircraft \_ b777_300 \_ tontonana \_ panel_sounds \_ dsd_fsx_test_sound.ini
5. Fichier configurable. Raha tsy voalaza ny rakitra fikirakirana, na raha tsy afaka mahita ilay rakitra voafaritra, dia hampiasa ny anarana nomerao izy. Ny kalitao dia hikaroka ny anaran-dalany manokana (raha toa ka efa niova anarana ianao na ny endriky ny endritsoratra), manaisotra ny fanitarana ny ".gau", ary ampio ny ".ini" ny lasitra, miaraka amin'ny anarana fototra. Io fomba fanao io dia tokony hampihena ny fepetra hanondroana ny antontan-drakitra ao anatin'ny tranga maro. Mariho fa raha mampiasa ny default ny maodely satria tsy manondro ny rakitra fikirakirana, dia hanao izany fotsiny izy tsy misy ado hafa. Na izany aza, raha mampiasa ny default izy satria tsy nahita ny rakitra nofarinao, dia havoakany ny boaty misy ny baiko Windows milaza aminao izany.
Famoronana ny rakitra Configuration
Ny rakitra fanoratana dia ampiasaina amin'ny zavatra maromaro. Ny tena manan-danja amin'izany dia ny mampifanaraka ny feo henoinao sy ny LVars izay ampiasainao hanaraha-maso ireo feo. Raha mijery ny laha-tahiry misy ny lisitry ny rakitra aty amin'ny faran'ity rakitra ity ianao, dia ho hitanao fa misy lohateny telo izy io. Amin'ireo anarana ireo, misy iray dia nantsoina hoe [Sounds] ary misy iray nomena anarana [LVars]. Samy manana lisitry ny fisoratana anarana izy ireo. Ny isa dia ny fampifandraisana ny fifandraisana eo amin'ny feo sy ny LVar. Mariho fa izany no hany lanjany amin'ny fanisàna ny fidirana. Ny feo amin'ny fidirana Sound00 dia mifanandrify amin'ny LVar ao amin'ny Lvar00, ny feo amin'ny fidirana Sound01 dia mifanandrify amin'ny LVar ao amin'ny Lvar01, sns.
Raha toa ianao ka tafangona amin'izao fotoana izao, amin'ny famaritana ny LVars ao amin'ny antontan-taratasim-pandrafetana, dia omenao fotsiny ilay anarana malemy. Tsy manampy "L:" amin'ny voalohany, na "laharana" amin'ny farany. Tsy misy ifandraisany amin'ny fomba ahafahanao miditra amin'ireo variables amin'ny XML, tsy misy afa-tsy ny fomba ampiasain'ny C / C ++ hoatr'izany.
Rehefa mamorona fandraisam-peo ho an'ny feo ao amin'ny rakitra fikirakiranao ianao, dia azonao atao, raha tianao, dia manorata volavola iray hampiharina amin'ny feo rehefa mavesatra. Jereo ny fidirana an-tsehatra roa voalohany ao amin'ny tahiry .ini eto ambany. Ity safidy ity dia mahasoa raha toa ianao, na ny mpampiasa ny vokatrao, dia mahatsapa feo na feo manokana, araka izay voarakitra, dia be loatra. Azonao atao ny manondro ny habetsaky ny ampiasaina ary dia tsy voatery hanelingelina ny fametrahana azy ao anatinao. Ny fametrahana ny habetsaky ny volam-bahoaka amin'izany fomba izany dia tsy manakana anao tsy hanova ny volan'ny volanao any aoriana.
Rehefa milaza ny feo ao amin'ny antontan-drakitra fikirakirana ianao, dia hanaraka an'io baiko io ihany koa ny mari-pamantarana raha hamaritra ny anaran'ny feo raha toa ka manondro ny anaran'ny antontan-drakitra. Azonao ampiasaina ny lalana mifandraika (manomboka amin'ny "dot" ary mifandray amin'ny ordinatera ao amin'ny hazo FS folder) na afaka manamboatra lalana iray tanteraka, mampiasa ny làlana mankany amin'ny rakitra fikirakirana ho fototra (amin'ny filazàna ny \_ or / ny endri-tsoratra voalohany ao amin'ny string, na ny lisitra misy ny lahatahiry sy ny rakitra raha tsy misy ny lozam-pifamoivoizana.) Jereo ny fikandrana voalohany eo amin'ny laha-tahiry .ini eto ambany. Izy no mamaritra ny lahatahiry antsoina hoe PanelSounds, hita ao anatin'ny lahatahiry izay ahitana ny rakitra fikirakirana, ho toy ny toerana ho an'ny rakitra feo.
Ny mari-pamantarana dia tsy hanamarina ny fanamafisam-peo manokana amin'ny fotoana fohy. Na dia izany aza dia hampiasa boaty hafatra Windows izy hampahafantarana ny mpampiasa fa tsy misy feo manavaka raha misy fikasana natao hamoahana feo.
Ny fanovana ao amin'ny vondrona fahatelo, [Config] dia nodinihina taty aoriana.
Miasa amin'ny feo
Mba hifehezana feo iray, dia ny fametrahana ny LVR mifanaraka aminy amin'ny sora-baventy voatanisa etsy ambany noho ny zavatra tianao:
1 (> L: SomeXMLControlVar, laharana) dia hilalao indray mandeha indray mandeha, tsy misy fanovana natao ho an'ny habetsaky na fandefasana piano.
0 (> L: SomeOtherXMLControlVar, laharana) dia hanakana ny feo raha toa ka milalao izy.
8 (> L: YetAnotherXMLControlVar, tarehimarika) dia haka ny famandrihana sy ny fandefim-peo eo an-toerana aloha. Izany dia hampihatra azy ireo amin'ny feo voamarina, ary amin'ny farany, amin'ny manomboka milalao ny feony amin'ny fomba fametahana.
Azo ampiasaina amin'ireto sanda manaraka ireto ny fari-pehezan-tsipika:
1 - Mitsangàna indray mandeha, fa tsy manova ny habaka na panesoana.
2 - Feo feo ho toy ny loop, raha tsy manova ny habaka na panesoana.
3 - Mametraha ny haavon'ny feo, amin'ny fampiasana ny fikandrana hita ao amin'ny variable Volana Volana, jereo eto ambany.
4 - Raki-peo ny feo misy ny feo, mametraka azy ao amin'ny fari-dahatsoratra VolumeOut voatondro.
5 - Mametraka ny fonon'ny feo, amin'ny fampiasana ny toerana hita ao amin'ny fari-dàlana PanIn.
6 - Raiso ny fikirakirana ny feo amin'izao fotoana izao ary apetraho amin'ny fari-dàlana PanOut.
7 - Ataovy indray mandeha ny feo, fa alaharo aloha ny habetsahana sy ny fonosana ho an'ireo fikandrana hita ao amin'ny variables VolumeIn sy PanIn.
8 - Feo feo ho toy ny loop, fa alefao aloha ny habetsaky sy ny fonosana ho an'ireo fikandrana hita ao amin'ny variables VolumeIn sy PanIn.
9 - Miantehitra ny fehezanteny. Hiverina 1 raha toa ka mihodina ny feon-kira feo, 0 raha toa ka milalao indray mandeha ny feo na tsy milalao mihitsy.
10 - Manaova feo. Ny feo dia halefa haingana avy eo amin'ny fivoahana mandeha amin'ny ordinatera, fa raha lehibe ilay rakitra feo, ary vita amin'ny azy, dia azonao atao ny mamoaka azy avy hatrany, ary mamerina ilay fahatsiarovana. Ity didy ity dia mety ho ilaina ihany koa mandritra ny fanandramana. Azonao atao ny manova ny feo ary mamerina izany, tsy manala ny tontonana manontolo.
11 - Mampidira feo, mampiasa ny fitaovana feo Windows. Amin'ny alàlan'ny default dia ampiasaina ny fitaovana fanamafisam-peo Windows mba hilalao feo. Raha te hampiasa ny fitaovana an-tariby Windows ianao (amin'ny ankapobeny karatra feo hafa, na USB fefy) dia azonao ampiasaina ny sandan'ny 11 mba hamenoana ny feon'ny filalaovana ny feo. Ny didy hafa rehetra, raha tsy maintsy mameno feo izy ireo alohan'ny hanatanterahana ny asany, dia hameno ny feo ho an'ny fitaovana fikandrana Windows. Raha te hampiasa ilay feo feo ianao, dia mila mampiasa io baiko io ianao mba handefa ilay feo aloha vao manao zavatra hafa miaraka aminy. Raha toa ilay fitaovana feo dia mitovy ny fitaovana fanamafisam-peo, ny feo dia heno amin'ny alalan'ny fitaovana misy feo. Raha tianao ny feo hivoaka amin'ny loha-ny mpampiasa, raha misy, dia azonao ampiasaina io sanda io. Raha misy mpampiasa iray tsy manana tononkalo, dia ny feo iray ihany no hilalao amin'ny zava-misy rehetra ampiasain'ny mpampiasa. Ny fampidirana ity fonosana ity dia fitaovana izay ahafahan'ny mpampiasa mametraka mazava tsara ny fitaovana fanamafisam-peo mba hampiasaina. Manantena aho fa saika amin'ny tranga rehetra dia tsy ilaina akory ity tetikasa ity. Ilaina ihany no ilaina raha mahatsapa ny mpampiasa fa tsy mety amin'ny FS ny soatoavin'ny Windows, saingy tsy te hanova ny fefy Windows.
12 - Tahaka ny 11 etsy ambony, fa mampitombo ny feo ampiasaina amin'ny fitaovana fantsona Windows.
Azonao atao ny mametraka ireto zavatra manaraka ireto ao amin'ny sehatra Config ao amin'ny .ini. Naseho miaraka amin'ny soatoavina mifanaraka aminy izy ireo.
Ny default dia 10, fa ny 1000 amin'izao fotoana izao. (Eny, mamaky izany ianao!) Tsy hitako izay olona mampiasa an'ireny maro ireny, fa ny fahatsiarovana dia nomena haingana ankehitriny, ka tsy misy ratsy eo amin'ny fetra farany. Izany dia ahafahan'ireo mpampiofana voatokana mba hialana amin'ny fametrahana maimaim-poana iray monja amin'ny lasitra amin'ny tontonana iray ihany. Hitako izany. Ny fitazonana ny ampahany betsaka amin'ny isan'ny feo hampiasainao dia hampihena ny CPU sy ny fampiasana fahatsiarovan-tena amin'ny lanjany.
Raha toa ka misy hadisoana maromaro mitranga, ny fari-pehezin'ny mari-pana dia hijanona amin'io lanja io. Ny default dia -1. Azonao atao ny mifidy karazana tsaramaso tianao, afa-tsy ny isa 1 ka 99, izay voatahiry amin'ny didy tena izy. Ny mari-pamantarana izao dia manana bokotra Windows Message Boxes namboarina ao anatin'izany izay hiseho raha misy hadisoana. Manantena aho fa hany tokana hany ka ho hitanao raha toa ka tsy mahita laha-tahiry voatondro ao amin'ny rakitra .ini ny fandaharam-potoana. Mba hanamorana ny famahana olana dia hampahafantatra ilay mpampiasa izay rakitra tsy hita. Raha misy fahadisoana dia tsy hisy intsony ny fanovana hafa amin'ny fanovana ny feo. Ny feo hafa kosa dia azo atao.
Azonao atao ny mametraka an'io fariba io ho valiny manan-danja 3.
1 - manakana ny feo rehetra izay milalao ankehitriny.
2 - maneso ny feo rehetra. Izy io dia mametraka ny volany amin'ny -10000, saingy tsy manakana azy ireo tsy hilalao.
3 - mampihontsona ny feo rehetra efa voakorontana. Izy io dia mamerina indray ny safidin-tsarimihetsika nomena azy.
Amin'ny toe-javatra tsirairay, dia hiverina amin'ny 0 ilay fari-kafa.
Ampiasao io fari-peo io mba hanondroana ny safidin'ny volume ampiasaina amin'ny baiko SetVolume (3). Ny isa dia voatondro ho sarobidy eo amin'ny 0 (feno volume) ary -10000 (100 db attenuation, tsy azo ovaina). Amin'ny fampiharana, mety tsy mety ny fandrefesana izay -3000 (30 db attenuation).
Ampiasao io fari-peo io mba hanondroana ny fikandrana panamboarana ampiasaina amin'ny baiko SetPan (5). Pan dia voatondro ho lanjany eo amin'ny -10000 (feno havia) ary 10000 (feno ankavanana). 0 dia mifantoka.
Ampiasao io fari-peo io mba handraisana ny habaka volom-paritra miaraka amin'ny baiko GetVolume (4).
Ampiasao io fari-peo io mba handraisana ny fikandrana panamboarana amin'ny baiko GetPan (6).
Ampiasao io fari-peo io mba handraisana ny fametahana ny loop amin'ny baiko Get Looping Status (9).
Io fari-dàlana io dia mandray ny habetsaky ny feo ampiasaina rehefa navoaka ny baiko farany amin'ny baiko farany. Mariho fa mety tsy hihatra intsony ity loha-hevitra ity - azo ovaina amin'ny baiko SetVolume izany.
Io fari-dàlana io dia mahazo alalana avy amin'ny fampisehoana rehefa ampiasain'ny baiko farany. Mariho fa tsy azo ampiharina intsony ity fametahana ity - mety ho niova tamin'ny baiko SetPan.
Io fari-dàlana io dia ahazoan-dàlana automatique ny fametrahana ny loop izay nampiasaina rehefa navoaka ny baiko farany farany.
Other LVARS, anarana tsy azo fidiana:
Amin'ny roa FS9 ary FSX, hiverina ity XnUMX ity raha toa ka mazoto ny feon'ny FS ary 1 raha tsy izy ireo. Ny feon'ny valiny manokana dia hanaraka ny fanamafisam-peo FS - hitsofoka izy raha tsy mandeha ny feon'ny FS na raha ajanony ny simba.
Settable. Raha apetraka amin'ny 1, dia hampiasa ny habetsahan'ny tahiry 0 ho 100 ny gidro, miaraka amin'ny 100 misolo tena ny volomborona ary 0 misolo tena tanteraka. Raha apetraka amin'ny 0, dia hampiasa ny maodam-peo DirectSound, izay -10000 ho tototra tanteraka, ho an'ny 0, izay maneho ny volom-borona. Mariho fa raha hitanao ny sanda mety ho an'ny volavolan-tsarimihetsika ao amin'ny lahatsary [Sounds] ao amin'ny filein 'iini, dia manizingizina fa te hampiasa ny laharana efa ela ianao ary hametraka azy io araka ny tokony ho izy. Ho an'ny tetika ara-teknika, ny laharana DirectSound dia maneho ny fahamendrehana amin'ny 100ths of decibels, ka ny sandan'ny -10000 dia maneho ny fihenan'ny 100 decibels. Aza manova an'io fari-peo io raha vao vita izany - zavatra ratsy no hitranga.
Io fari-pitaratra io dia manondro raha misy fepetra fanamarihana manokana. Mamerina 1 raha toa ka manasaraka ny feo sy ny feony feo ny rafitra Windows, ary ny 0 raha tsy izany.
Ireo variables ireo dia mamerina amin'ny antsipirihany amin'ny antsipiriany momba ny dikanteny Flight Simulator izay mihazakazaka.
Ny FSVersionMajor dia miverina 9 ho an'ny FS2004 ary 10 ho an'ny FSX. Nomena anao raha toa ka te hampiasa kaody misy dikanteny manokana ianao ao anaty refy manokana.
FSX Ihany. Miverina ny 1 raha nisy rohy mankany SimConnect dia niorina ary 0 raha tsy izany.
Hiverina 1 raha hiato ny simulation, ary 0 raha tsy izany.
Amin'ny roa FS9 ary FSX, hiverina ity XnUMX ity raha miova ny feony ary 1 raha tsy nohodinina ny feo.
Amin'ny roa FS9 ary FSX, hiverina io 1 io fiovana raha toa ka misy ny XML gauge nampivadika ny feo tamin'ny fametrahana ny GlobalCommands variana ho 2. Raha ny feon'olon-tokana dia ho azo fehezina amin'ny alàlan'ny fametrahana ny haavon'izy ireo, ny feon-feo dia tsy ho feno ny fiovana miaraka amin'ny fiovaovan'ny feo na sata miato. Mila manaja amin'ny manual ianao amin'ny alàlan'ny fametahana ny variable Global Commands ka 3. Raha tsy nohodinihina loatra ny feo dia hanana sanda tsy misy fika ny variana.
FSX Ihany. Nalaina tamin'ny alàlan'ny SimConnect.
0 - Mijery ivelany (toerana).
1 - 2D fiarandalamby
2 - 3D VC mijery
4 - Fijerin'ny orthogonal (sarintany)
FSX Ihany. Ny sandan'ny sandoka dia zaridaina. Raha apetraka amin'ny sanda tsy misy aiko, ny sandan'ny ViewSystemStatus, etsy ambony, dia havoaka ao anaty boaty misy hafatra Windows, isaky ny miova izy io. Mazava ho azy fa fanandramana ihany.
FS2004 ihany. Mamerina ny hafainganam-pandaminana hafa izay misy ny fotoana hafa.
Ankoatra ny fizarana roa voalohany ao amin'ny sehatra [Sounds], ity ohatra manaraka ity dia maneho ireo mari-pamantarana maimaim-poana izay ampiasain'ny gidra raha tsy misy ny nomeraon-drakitra voatondro, na raha tsy misy ny rakitra fikirakirana tanteraka. Ny endritsesana voalohany dia mampiseho ny fehezan-kafatra hita ao anatin'ny lahatahiry antsoina hoe PanelSounds, izay misy ity lahatahiry ity ao anaty ordinatera amin'ny alàlan'ny fiaramanidina. Ny doka roa voalohany dia mampiseho ny famaritana ny lanjan'ny volavolan-dàlana hantsoina amin'ny feo raha vao nasiam-panamboarana azy. Ny endritsoratra voalohany sy fahatelo dia maneho ny filazalazana ny rakitra, ao anatin'ny lahatahiry iray, miaraka amin'io lahatahiry io izay hita ao anatin'ny lahatahiry mitovy amin'ny rakitra fikirakirana.
Fotoana mamorona pejy: 0.167 segondra